Madaxweyne Farmaajo oo shaki weyn ka qaaday waraaqda Jawaabta ah oo ay Sacuudiga usoo dirtay - Caasimada Online
Home Warar Madaxweyne Farmaajo oo shaki weyn ka qaaday waraaqda Jawaabta ah oo ay...
Madaxweyne Farmaajo oo shaki weyn ka qaaday waraaqda Jawaabta ah oo ay Sacuudiga usoo dirtay
Muqdisho (Caasimada Online) –Waxaa dhawaan safar ku tagay dalka Sacuudiga madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuuna la kulmay Boqorka Sacuudiga isagoo ka codsaday inuu dhex dhexaadiyo Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta kadib markii uu ka dhex qarxay khilaaf weyn oo ka dhashay heshiiskii ay Somaliland ugu saxiixday Imaaraadka inay saldhig Militari ka sameystaan Berbera.
Haddaba waxaa si rasmi ah arrintaan uga soo jawaabtay dowladda Sacuudiga oo dowladda Soomaaliya uga warbixisay halka uu marayo heshiiskaas iyo dacwadii laga codsaday inay u gudbiso Imaaraadka.
Sida warar hoose ay sheegayaan Qoraal kasoo baxay Sucudiga ayaa soo gaaray Farmaajo , wuxuu ku saabsanaa arimaha u dhexeeya Labada dale ee Soomaaliya iyo Imaaraadka , iyo sida Boqortooyada Sucuudiga ay u wajahdsay Dacwadii kaga timid hogaanka Cusub ee Soomaaliya.
Qoraalka ay soo dirtay Sacuudiga ayaa muuqday inuusan aheyn mid damin karo Khilaafka u dhaxeeyo labada dowladood waxaana lagu sheegay qoraalkaasi in Boqortooyada Sacuudiga ay bilowday in Imaaraadka ay kala hadasho arrinta ku aadan Saldhiga Malatari ee Berbera kaasoo uu ka dhashay muran badan.
Qoraalka ay soo dirtay dowladda Sacuudiga ayaa u qornaa sidaan: “Sacuudigu waxa uu ka shaqeynayaa maslaxada labad dal, waxaa bilowday dadaalada xalka loogu raadinaayo muranka ,Wax waliba waxa ay mari doonaan sharciga waxaan ku rajo weynahay in laga dhabeeyo xal u helida arrinta Saldhiga wax waliba waxa ay noqon doonaan sidii loogu tallo galay” aya lagu yiri qoraalka Sucuudiga Soomaaliya uu usoo diray.
Warbixinta ay soo dirtay dowladda Sacuudiga ayaa waxay dowladda Soomaaliya ka muujisay shaki weyn oo ku aadan in Sacuudiga u taagersan yahay heshiiska ay Imaaraadka Berbera saldhigga uga sameesaneyso maadaama Sacuudiga ay kamid tahay dowladaha dagaalka kula jiro Xuutiyiinta Yeman.
Sacuudiga ayaa hoggaamiye ka ah dagaalka lagu jiro Shiicada Yeman waxayna midaas muujineysaa inaysan sacuudiga ka dhaadhacsiin karin Imaaraadka inuu iska dhaafo Bebera.